#पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more #पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड - www.khabardabali.com
भदौ ५ गते, २०७६ - ११:५९
एकताको नाममा नेताहरुमाथि खेल्ने र लडाउने काम भयाे : अष्टलक्ष्मी शाक्य
नेता माधवकुमार नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा विधानलाई अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन् । उनले विधानको धारा ४६ मा भएको ‘एक व्यक्ति एक पद’लाई अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने माग...
भदौ ३ गते, २०७६ - १२:०१
नेकपामा प्रचण्ड एकल अध्यक्ष !
काठमाडाैं । आइतवार बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ओलीलाई औंला उठाएर या त पार्टीको अध्यक्ष छाड्न या त प्रधानमन्त्री छाड्न चेतावनी दिए । बैठक सकिनेबित्तिकै...
साउन २६ गते, २०७६ - १३:०६
किन पटक-पटक पूर्वराजामाथि धावा बोल्छन् प्रचण्ड ?
काठमाडाैं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ‘ताज’ फुकालेको राजतन्त्रसँग अझै पनि बेलाबेलामा सशंकित भैरहेका जस्ता देखिन्छन् । आफ्नै नेतृत्वमा भएको १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहले...
साउन १५ गते, २०७६ - १२:११
प्रचण्डलाई हेग लैजाने कि आफै ‘हेल’ जाने ?
काठमाडाैं । जब-जब नेपाली राजनीतिमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निर्णायक भूमिकामा देखिन्छन, तब तब प्रचण्डमाथि ‘हेग’ को तरबार तेर्स्याइन्छ ।यसको दृष्टान्त यही हप्ता देखियो । नेकपाभित्र देखिएको...
साउन १३ गते, २०७६ - १४:५०
हेग लगे विश्वकै हिरो हुन्छु : प्रचण्ड (भिडियोसहित)
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई हेग लगिए पनि केही फरक नपर्ने बताएका छन्। सोमबार आफ्नै निवासमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफुलाई...
असार २७ गते, २०७६ - १३:५०
प्रचण्ड सचिवालयको खण्डन : भारतीय पूर्वराजदुत श्यामशरणसँग कुनै गोप्य भेट भएको छैन
काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय पूर्वराजदुत श्यामशरणबीच गोप्य भेटवार्ता भएको भनि सञ्चार माध्यममा आएको चर्चा प्रति प्रचण्डको सचिवालयले खण्डन गरेको छ । प्रचण्डको स्वकीय सचिव गंगा दाहालले...
असार २२ गते, २०७६ - १७:०५
महाधिवेशनमा विचार, राजनीति र नेतृत्व सहमतीबाटै टुंगिन्छ, प्रतिस्पर्धा हुँदैन् : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी पार्टीको महाधिवेशनमा सांगठनिक प्रतिस्पर्धा नहुने बताएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको महाधिवेशनमा विचार, राजनीति र...
असार २० गते, २०७६ - १४:३२
प्रचण्डलाई बाबुरामको जवाफ : दीपक मनाङ्गेजस्ता बौद्धिक भित्र्याएपछि अरु बौद्धिकहरु चाहिन्छ र ?
काठमाडौं । समाजवादी पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको टिप्पणी प्रति कडा कटाक्ष गरेका छन् । भट्टराईले सत्तारुढ नेकपामा दीपक मनाङ्गेजस्ता बौद्धिकहरुले...